Intshayelelo egqibeleleyo yeTitanium 720 ° yoMvelisi woKhuseleko kunye neFektri | Keja
UKeja Titanium 720o Unogada sisisombululo esikhuselekileyo sokukhusela isikhuseli kunye netyala. Yenziwe ngamacandelo amabini. Isembozo esingaphambili kunye nesembozo esingasemva, iibhodi ezisezantsi zezigqubuthelo ezibini ziyiglasi kwaye isakhelo senziwe ngeTitanium. Iglasi lekhava engaphambili sisikhuseli sekrini esenziwe ngeglasi ye-aluminium eyi-0.33 enamaxesha ama-2 onobushushu kunye nomgangatho ophezulu we-AB yeglu ye-degassing ekhawulezayo kunye neoyile yeminwe ethintela ukungcoliswa. Iglasi lekhava yangasemva ikwayi-0.33 yeglasi yealuminiyam enamaxesha ama-2 onobushushu kunye nenkqubo yomphezulu womatshini wokulwa ubushushu.
1, ukhuseleko olomeleleyo. Isakhelo somgangatho weTitanium seAlloy sinika ukhuseleko olomeleleyo kuneKeja inguqulelo yePP yangaphambili.
2, ukukhanya okuphezulu kunye ne-ultra thin. Rare ngumngundo ufe bephosa okoko kwaye itekhnoloji ivelisa le mveliso ngobunzima be-0.35 kuphela. Oku kuzisa abasebenzisi amava angcono kunePPU yangoku + yePC okanye iPVC okanye imeko yesilicone.
3, isisombululo sokhuselo esimanyanisiweyo somkhuseli wekhusi kunye netyala. Oku kubonelela abathengi ukuba bathenge indawo yokumisa. Ityala lokuthenga kunye nomkhuseli kunye.
I-4, umphezulu we-alloy titanium ulungelelwaniso lombane. Ivakala igudile kwaye ijongeka intofontofo kwaye intekenteke.
5, Ibhodi yeglasi iqhutyelwa nge-mat. Inokumelana ne-smudginess kwaye iphinde ibuyisele umbala wokuqala wefowuni ye-iPhone.
I-6, uyilo lobungqina bothuli ngothuli ubungqina bokubonisa ukugcina ifowuni yefowuni intsha intsha ngonaphakade.
I-7, umngxunya wokhuselo welensi uyilelwe ngasemva.
ubukhulu bekhava yangasemva
ingxubevange inxalenye ubukhulu
0.35 enobuso be-elct-plating
HD ifilimu yokulwa nokudubula
I-0.1mm, amandla okuqina kwe-2800g
Icala le-HD kabini
I-0.1mm, amandla e-4000g okunamathela
ukuprintwa kwesilika amaxesha ama-2 anamandla ngakumbi kwiglasi yeAluminiyam eyi-0.33
iglasi yokugquma ngasemva
AG 2times eyomeleleyo iglasi ye-Aluminium eyi-0.33
uthuli ubungqina umnatha
Umgangatho wentsimbi we-0.33
Ipensile / H.
g / intshi
AF, ngaphambi kovavanyo
AF, emva kovavanyo
(1 * 1 nez5000 times), 105degree
uvavanyo lokuwisa ibhola
Ubungakanani obupheleleyo obufumanekayo kwi-iphone 12
Egqithileyo I-2 kwi-1 yeglasi enomsindo + nephepha le-PET njengomkhuseli wesikrini
Okulandelayo: Iphepha elinokuchaphazeleka elinokuphinda linikezelwe njengoMkhuseli weScreen